Zimbabwe: Feel Free to Come Home, Diasporans Told - allAfrica.com
"Zimbabweans from all over the world are voluntarily returning to their country. There is no single returnee that has been persecuted regardless of the circumstances of their departure. Those who have failed to meet immigration requirements in their countries of sojourn are welcome home and their safety is guaranteed," said Mr Mangwana.
"The Government does not encourage any Zimbabwean to be undocumented. Therefore, when required it facilitates appropriate documents for its citizens using its consular staff in different countries. This is in order to fulfil its constitutional responsibility that no Zimbabwean should be deemed stateless," explained Mr Mangwana.
"It is common consular procedure and practice that those immigrants without proper identification or documentation and alleged to be Zimbabweans by the host country be interviewed by consular officers from the embassy to establish whether indeed they are who they are purported to be, in this case whether indeed they are bona fide Zimbabweans. This is a standard consular procedure to avoid countries admitting foreign nationals into their jurisdictions in error."
Mr Mangwana dismissed allegations that there was persecution of opposition supporters, saying Zimbabwe under the new dispensation had opened up the political and democratic space while upholding human rights in terms of the country's Constitution and the Universal Bill of Rights.
"There are no political persecutions in Zimbabwe, neither are there any political prisoners and Zimbabweans who have lived abroad for many years are returning every day and living happily and contributing to the country's development towards Vision 2030," he said.
The Independent said in the article it had learnt that at least seven Zimbabwewan nationals, some of whom had lived in the UK for more than a decade, had last week been ordered to attend meetings at a Home Office building in the city of Sheffield "where they were asked 'distressing' questions by an embassy official from their country".